सम्पादकीय – Page 8 – erupse.com
पसिनाको मूल्य कति!
प्रत्येक दिन विहान उठे देखि बेलुका सुत्ने बेला सम्म हामीले प्रयोग गर्ने सबै चिज मजदुरकै पसिनाको कमाई हो । विहान सवेरै देखि राती सम्म पनि मेहनत गरेर जब मजदुरले काम गर्दछन् तब मात्र मानिसले खानका लागि रोटी अनि लगाउनका लागि कपडा तयार हुन्छ । जब सम्म मजदुरले आफ्नो पसिना धर्तीमा मिसाउँदैन तब सम्म धर्तीबाट..
मानिसलाई चाहिने गास, बास र कपास सँगै मनोरञ्जन पनि हो । परापूर्वकाल देखिनै मनोरञ्जनको साधन र मनोरञ्जनका लागि गरिने लगानीका बारेमा कथा र किमबदन्तीहरु हामीले सुन्दै आएकै छौं । अहिले पछिल्लो समय भने भोजभतेर, विवाह तथा अन्य कार्यक्रमहरुमा पनि मनोरञ्जनका लागि डिजे बोलाएर गित घन्काउँदै कम्मर मर्काएर..
विश्वमा धेरै अनलाइन तथा ब्लगहरुले आफूर्ला सञ्चारको गतिलो माध्यम हौं हामी भन्दै स्थापीत हुने प्रयास गर्ने क्रममा अहिले धेरै यस्ता चिजहरु पनि देखिएका छन् अर्काको रचनालाई आफ्नो बनाउने र आफ्नौ बाइलाइन नै दिएर पनि प्रचार प्रशार गर्ने गरीएको छ । पछिल्लो समय सञ्चार क्षेत्रलाई नियमनकारी निकाय प्रेस..
बैशाख १२ को मध्य दिन
आज बैशाख १२ गते अर्थात आज भन्दा ठीक ४ वर्ष अगाडी मध्ये दिन अर्थात् १२ बजे आशपास आएको विनाशकारी भूकम्पले हजारौं मानिसको ज्यान लियो । कयौं नागरिकहरु घाइते भए । भौतिक पूर्वाधारहरुको त के कुरा भयो र अर्बौंको नोक्सानी भयो । व्यक्तिका घर तथा सामुदायिक तथा सरकारी भवनहरुको पनि त्यही हालत भएको थियो ।..
विश्वमा धेरै यस्ता समय अनि दिनलाई विशेष महत्व दिँदै सम्झने गरिन्छ । त्यस्तै दिनहरु मध्ये नेपालमा मात्रै मनाइने दिवस तथा चाडहरु मध्ये आजको दिन अर्थात् लोकतन्त्र दिवस पनि एक हो । १०४ वर्षे राणा शासनको अन्त्यका लागि भएको बलिदान अनि पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य सँगै बहुदलिय प्रजातन्त्रको स्थापना होस या..
लामो रस्साकस्सी अनि लामै प्रयासपछि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकताले जिल्ला तहसम्मको पूर्णता पाएको छ । तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच भएको पार्टी एकतापछि अहिले देशका ७७ वटै जिल्लाको अध्यक्ष र सचिवको टुङ्गो नेपाल कम्युनिष्ट..
नेपाली साहित्यको विभिन्न विधाहरु मध्ये छन्द प्रमुख मध्येको एक हो । छन्दलाई पद्यलेखन अथवा बृत्त भनिन्छ । छन्द भन्नाले लय हालेर बाचन गर्ने भन्ने पनि तर्क गर्नेहरु धेरै छन् । सामान्य भाषामा बुझ्दा छन्द भन्नाले लय मिलाएर कृति लेख्ने तथा बाचन गर्ने एउटा शैलि हो छन्द । वर्ण तथा मात्रालाई मिलाएर तयार गरीने..
सरकारले सोमबार देखि देशैभरी विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरेको छ । हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई बिद्यालय पु¥याउँ भन्ने नाराका साथ सुरु भएको अभियानले देशै भर विद्यालय उमेर समूहका कुनै पनि बालबालिका नछुटुन भन्ने नै मूल उद्देश्य हो । नेपालका हिमाली जिल्लाहरुमा फागुनबाट नयाँ शैक्षिक सत्र..
हिजो हामीले २०७५ लाई विदाई गरी सकेको छौं भने आज बिहानै हामीले नयाँ वर्ष २०७६लाई स्वागत गरी सकेका छौं । गत वर्षम के के भयो भन्दा पनि अब हामीले नयाँ वर्षमा के गर्ने भनेर सोच्ने समय हो । विगतमा के गरीयो के गरिएन भन्दा पनि यो वर्ष हामीले कस्तो बनाउने र के गरेर अगाडी बढ्ने भन्ने तर्फ सोच्न पर्छ । जव मानिसले..
राम कि रावण?
हामीले सँधै परापूर्व काल देखि मान्दै आएका र त्यही समय देखि गर्दै आएका कामलाई नै सही भन्दै अगाडी बढ्दै आएका छौं । तर कुनै यस्ता चीजहरुले हामीलाई कहिँ कतै राम्रो सँग झड्का दिएको हुन्छ तै पनि हामीले त्यसलाई सामान्य मान्दै अगाडी बढ्छौं । आखिर किन हामी सँधै अन्धभक्त भएर त्यही चिजलाई मानी रहेका हुन्छौं? त्यो..